အမေရိကန် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် မက္ကဆီကိုနယ်စပ်တွင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ဖြစ်ပေါ် - Xinhua News Agency
မက္ကဆီကိုစီးတီး၊ မေ ၂၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ တောင်ဘက်နယ်စပ်တွင် ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာမှုများအပေါ် လွဲမှားစွာ ကိုင်တွယ်မှုများကြောင့် ဒေသတွင်းနေထိုင်သူများအတွက် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းများ တိုးပွားလာစေခဲ့သည်။
နယ်စပ်တစ်လျှောက်ရှိ မက္ကဆီကို မြို့များတွင် စာရွက်စာတမ်းမပြည့်စုံသဖြင့် အမေရိကန်ဘက်မှ ပြည်ဝင်ခွင့်ငြင်းပယ်ခံရသူများတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာနေရာ အဆိုပါ ဒုက္ခသည်များသည် လုံခြုံမှုမရှိခြင်း၊ သန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်းနှင့် ရေရှည်မထိန်းထားနိုင်ခြင်း စသည့်အခြေအနေများ သိသိသာသာ များပြားလာခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသို့တရားဝင် ဝင်ရောက်လိုသည့် ဟွန်ဒူးရပ်စ်နိုင်ငံသူ တစ်ဦးဖြစ်သည့် Rosalina ဆိုသူသည် မက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်သော Reynosa မြို့တွင် ၆ လကြာ ရောက်ရှိနေထိုင်လျက်ရှိသည်။
သူ(မ) က ခင်ပွန်းသည်နှင့် အခြား ကလေး ၂ ဦးနှင့်အတူ ပြန်လည် ဆုံစည်းလိုသောကြောင့် သမီးဖြစ်သူကို အမေရိကန်သို့ခေါ်ဆောင်ရန်မျှော်လင့်သူဖြစ်သည်။
Rosalina က “ အဲဒီကိစ္စကတော်တော်ခက်ခဲပါတယ်၊ ကျွန်မတို့နိုင်ငံလည်းမဟုတ်ဘဲ အခြားနိုင်ငံမှာ ခရီးရှည်နေသလိုပေါ့၊ ကျွန်မတို့ သွားနေတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ကျော်ဖြတ်ရမှာတွေရှိနေတာလေ၊ အဲဒါ ကမလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ ဒီကိုဘေးကင်းစွာနဲ့ရောက်ခဲ့တယ်လေ၊ ကျွန်မတို့နေမကောင်းတွေဖြစ်ပြီး ကလေးတွေလည်းပင်ပန်းနေပါပြီ ၊ ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ဆက်သွားရဦးမှာပါ” ဟုဆိုသည်။
Rosalina ၏ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှု လုပ်ငန်းစဉ်သည် ဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ထက်တွင် ပြဌာန်းခဲ့သည့် COVID-19 ပျံ့နှံ့မှုကိုကာကွယ်ရန် မြေပြင်မှ ဝင်ရောက်လာသည့် ရွှေ့ပြောင်းသူများကို တားဆီးရန် အမေရိကန် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အာဏာပိုင်များကိုခွင့်ပြုချက်ပေးထားသော ဥပဒေပုဒ်မ ၄၂ ကြောင့် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာနေခြင်းဖြစ်သည်။
Rosalina သည် Reynosa မြို့ရင်ပြင်တွင် ယာယီအမိုးအကာအောက်တွင်နေထိုင်ခဲ့ရပြီးနောက် ယင်းမြို့၏ Senda de Vida ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများစခန်းသို့ မကြာသေးမီကရွှေ့ပြောင်းနေရာချထားခံရသည့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ ၂,၀၀၀ တွင်တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်သည်။
Reynosa မြို့တော်ဝန် CARLOS PENA ORTIZ က
“ဒီမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေချမှုတွေကို မြင်တွေ့နေရတဲ့ကိစ္စက တစ်နှစ်ကျော်ကြာဖြစ်နေခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါ၊ ဒီကိစ္စဟာ ကျွန်တော်တို့ မြို့ကို လုံခြုံရေးရော၊ ကျန်းမာရေးအပြင် စီးပွားရေးပါ တော်တော် ထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာ အထင်အရှားပါပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီလို ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေချနေထိုင်မှုပုံစံတွေကြောင့်တော်တော်ထိခိုက်နေရပါပြီ” ဟုဆိုသည်။
Senda de Vida သည် Rio Grande မြစ်၏ နယ်စပ် မီတာ ၅၀ အကွာထက်မဝေးသောဒေသဖြစ်သည်။
အမေရိကန် အကောက်ခွန်နှင့် နယ်စပ်ကာကွယ်ရေးမှ အချက်အလက်များအရ အောက်တိုဘာလတွင် စတင်သော လက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ် အစပိုင်းမှစ၍ အမေရိကန် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင်များက အထောက်အထားမဲ့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူပေါင်း ၁.၂ သန်းကျော်ကို ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းတို့အနက်အများစုမှာ အသက်စွန့်ပြီး Rio Grande မြစ်ကိုဖြတ်ကူးဝင်ရောက်လာကြသူများဖြစ်သည်။
Senda de Vida ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူများစခန်းတည်ထောင်သူ HECTOR SILVA က
“ စိန်ခေါ်မှုကတော့ လူတွေအနေနဲ့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်မှုကို လုံးဝမစမိစေဖို့အသေအချာစီမံရမှာပါ”
အမေရိကန်မီဒီယာမှထုတ်ပြန်ချက်အရ မကြာသေးမီ က ပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်မှုများကြောင့် အမေရိကန်၌ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးကဲ့သို့သော ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသူများ၏ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်သမားရှားပါးမှုများသိသိသာသာမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်းဆိုသည်။
ကပ်ရောဂါ မတိုင်ခင်ကာလအတိုင်း ထိန်းထားပါက အမေရိကန်၌ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူ ပမာဏမှာ ၂ သန်းခန့် ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
မကြာသေးမီက အမေရိကန် အစိုးရက ဥပဒေပုဒ်မ ၄၂ အား မေလ ၂၃ ရက် မှစတင်ကာ အကျုံးဝင်ခြင်းမရှိတော့ကြောင်း ကြေညာခဲ့သော်လည်း လူဝီစီယားနား ဖယ်ဒရယ်တရားရုံးက ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားချက်များကို အကန့်အသတ်မရှိ အချိန်ဆွဲရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကြေညာချက်ကို ယာယီ ရပ်ဆိုင်းထားရန်အဆိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ (Xinhua)
MEXICO CITY, May 19 (Xinhua) — The United States’ mishandling of the immigration influx on its southern border is generatingahuman rights crisis for regional communities.
Mexican towns along the border are struggling to accommodate swelling numbers of undocumented migrants refused entry by the U.S., leaving the refugees increasingly exposed to unsafe, unsanitary and unsustainable conditions.
Rosalina,aHonduran who seeks to enter the U.S. legally, has been staying in the Mexican border town of Reynosa for six months.
She hopes for bringing her daughter to the U.S., to reunite with her husband and two other children.
SOUNDBITE 1 (Spanish): ROSALINA, Honduran migrant
“It has been very hard. It has beenalong journey inacountry that is not ours. We have to cross over to get to where we are going. It has not been easy, but we arrived here safely. We got sick and our children were tired, but we will go on.”
Rosalina’s immigration procedures were delayed due to Title 42,aDonald Trump-era regulation that allows U.S. immigration authorities to ban migrants from entrance on the grounds of preventing the spread of COVID-19.
“It is an issue that has been going on for more thanayear, where it has caused irregular settlements like this one that you can see. Obviously it has affected our cityalot, in terms of safety, health, and also, economy. We have been affected by this type of irregular settlements.”
According to data from the U.S. Customs and Border Protection, since the beginning of the current fiscal year, which began in October, U.S. immigration authorities have detained more than 1.2 million undocumented migrants, many of whom risked their lives to cross the Rio Grande.
SOUNDBITE3(Spanish): HECTOR SILVA, Founder of Senda de Vida migrant shelter
“The challenge is to make sure that people do not start entering illegally.”
According to U.S. media, recent immigration restrictions have led toanoticeable shortage of labor in U.S. sectors that traditionally employ immigrants, such as agriculture and construction.
Estimates say the U.S. has2million fewer immigrants than it would have if the migratory flow had maintained its pre-pandemic volume.
The U.S. government recently announced Title 42 will no longer be implemented as of May 23, butafederal court in Louisiana filedatemporary restraining order on the decision to prolong its application indefinitely.